Raholinarivo Paolo Emilio :MANAO MPAMOSAVY MALEMY NY ADMINISTRATERA SASANY -
AccueilRaharaham-pirenenaRaholinarivo Paolo Emilio :MANAO MPAMOSAVY MALEMY NY ADMINISTRATERA SASANY
Tokony hanompo ny vahoaka, ny administratera sivily satria nandanian’ny Fanjakana vola be na dia ny fandoavana ny karaman’izy ireo fotsiny ihany aza. Raha ny tena izy ihany koa dia tokony hanompo ny fanjakana izy ireo fa tsy manao mpamosavy malemy ka ny ao an-trano ihany no aripaka. Izany no azo hamintinana ny nambaran’ny administratera sivily, Raholinarivo Paolo Emilio, tamin’ny dinika nifanaovana taminy, omaly. Nohamafisiny fa “misy ny administratera izay miditra lalina amin’ny politika ka lasa sakana ho an’ny fampandrosoana.”. Manao antso avo amin’ireo namany izy mba tsy hanao izany. “Aoka tsy avy amintsika ny fandotoana ny fampandrosoana, satria tsy ary ho fantatry ny Filohan’ny Repoblika ny kolikoly ataony, firenena hitambarana ity. Ny vola lany amintsika fonctionnaire…moa ve isika mba manaraka ny lalana madio. Misy anjara andraikitry ny mpiasam-panjakana fa tsy hoe, manao 30 andro fanjava iraika fotsiny, izany no tsy mampandroso. Tokony hieritreritra tsara izy ireo fa tsy zaza ka hoe andeha hosaziana foana”.
« Tsy tia Tanindrazana »
Ny resaka frankôfônia, dia nambarany fa « tena tombony ho antsika, ny vahoaka malagasy no jerena. Voninahitra ho an’i Madagasikara iny. Fahombiazana iny…mbola betsaka ny ezaka azo atao. Nampalahelo fa ny presse teto indray no nanamatroka ny zavatra tsara vita, ny presse etrangère dia nanambara fa nahomby iny… adala ve ny presse etrangère niteny hoe nety iny francophonie iny, adala ve Michaëlle Jean : niteny hoe nety iny ».
Ny avy amin’ny Mle dia efa fantatra fa “gazetin’ny mpanohitra ireo, fanoherana botolo no hanakaramana azy ireo na inona na inona zavatra ataon’ny fanjakana dia tsy maintsy mahita lazaina izy ireo”. Misy mantsy ny mpanohitra, tahaka an-dRavololomanana Lalatiana izay nilaza mazava tamin’ireny fotoana ireny fa tena voninahi-pirenena ny fandraisana Frankôfônia. “Amin’izao fotoana izao dia tsy izy ianareo mpanohitra , ianareo manohitra fitondrana, ary tsy tia tanindrazana ireo satria raha tia tanindrazana ireo, dia hajainy ny safidim-bahoaka, fa tsy hataony an’ireny, firenena hitambarana ity », hoy ihany izy. Ankoatra izay dia nohazavainy ihany koa fa tena zava-dehibe ny fanaovana ny filan-kevitry ny ministra atao any amin’ny Faritany satria mba mahita ny zava-misy marina eny ifotony ny fitondram-panjakana ary mampandroso ny faritra kokoa izany.